Maka lesona amin’ny biby ratsy » lay andriamialy
- biby ratsy
- alimanaka gasy 2017
- ny olombelona dia biby
Accueil Actus Maka lesona amin’ny biby ratsy
Nalaza tato ho ato ny valala. Valala aman-tapitrisany no nandrakotra an’Antananarivo. Tsy azo lavina ny maharatsy izany toe-javatra izany. Ny valala mantsy rehefa maro loatra toy izany dia manjary biby mpanimba. Manimba ny voly, ny zava maitso izay ataony maty faisana ao anatin’ny fotoana fohy. Ao ny mifanome tsiny, ao ny mivavaka mafy, misy koa ireo adala mifalifaly nefa ny tokony ho atao dia ny maka lesona.
Ho an’ny biby toy ny vorona sy ho an’ny olombelona dia sakafo latsaka avy any an-danitra sady mahasalama ny valala raha toa ka tsy mbola nofafazana poizina. Kanefa raha amin’ny ankapobeny dia biby ratsy izy. Ratsy tokoa ny valala. Biby kely tsy ampy 10 sm ny halavan’iny iray nefa dia tsy vitan’ny malagasy ny maharesy azy. Karazany antsoina hoe « locustes » no manjary manao andiany toy izao.
Tsy hoe misy foana ny valala mirongatra toy izao. Amin’ny fotoana rehetra dia misy izy, saingy mandeha tsirairay. Rehefa misy rivo-doza na noho ny antony hafa ihany koa dia mivondrona amin’ny toerana iray ny valala. Miova koa ny tahan’ny hôrmônina « Serotonine » ao anaty atidohan’izy ireo ka dia miova ny fihetsiny.
Manomboka eo dia manjary tsy te hisaraka ny valala. Raha ampy ny sakafo ary tsy misy loza mandripaka azy ireo dia vetivety dia mitombo isa izy ireo. Miara-mirohotra amin’izay mandravarava izay rehetra eo anoloany. Sarotra ny miady amin’izy ireo noho ny habetsany sy ny fitomboany haingana.
Ny olombelona koa samy manana ny ady atrehiny, samy manana ny zavatra eritreretiny ho azo. Ny rivo-doza atrehiny anefa matetika dia mampisara-bazana azy ireo fa tsy mba mampivondrona azy toy ny valala. Ny lesona ampianarin’ny valala kanefa dia efa fantatry ny Ntaolo ihany fa ny hoe « Ny vitsy andevon’ny maro » ary « Ny mita-be tsy lanin’ny mamba ».
Article précédent Maratra i Dago
Article suivant Tsy rariny be dia be, BAD2014
Pour lire l’équivalent de cet article en français, cliquer ici. Mandeha ny fotoana. …
Comme les fêtes approchent, les vrais mendiants et les autres moins vrais de Tana se &laqu…